Tanan-dehibe: masaka hojinjana
"Moa hianareo tsy manao hoe va: Efa-bolana no sisa, dia tonga ny fararano? Indro, lazaiko aminareo: Atopazy ny masonareo, ka jereo ny eny an-tsaha, fa efa masaka sahady hojinjana izy" — Jao. 4:35.
Ho antsika koa, tahaka ny tamin'ireo mpianatra fahiny, no itenenan'i Kristy ireo teny ireo. Mandroso ny fotoana, miantso ireo mpanompony amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny asany ny Tompo mba hanopy ny masony sy hijery fa efa masaka hojinjana ny saha.
Tsy mbola nitodika any ivelany araka ny tokony ho izy amin'ny ezaka ataony ireo mpiasantsika. Tsy mbola rototra akory amin'ny asa izay tsy maintsy atao ireo mpitarika antsika. Rehefa mieritreritra ireo tanan-dehibe izay nanaovana asa bitika aho, izay misy an'arivony no tokony hampahafantarana ny fiavian'ny Mpamonjy tsy ho ela, dia miredareda ato anatiko ny faniriana hahita lehilahy sy vehivavy mirotsaka hanao ny asa amin'ny herin'ny Fanahy sady feno ny fitiavan'i Kristy ireo fanahy very.
Mahagaga fa tena nanao an-tsirambina ireo jentilisa an-tanan-dehibe izay eo am-baravarantsika isika. Tokony hisy ezaka mirindra hamonjena azy ireo. Tokony hiasa hampiova fo ireo jentilisa manodidina antsika isika ankehitriny, ireo izay miaina ao ambany aloky ny varavarantsika. Tokony hisy hira vaovao eo amin'ny molotr'izy ireo, ary tokony handeha hizara amin'ny hafa ao amin'ny haizina ankehitriny ny fahazavana avy amin'ny hafatry ny anjely fahatelo izy ireo.
Ilaintsika mihitsy ny hifoha, raha mbola misokatra ny lalana, mba hampandroso ny asa amin'ireo tanan-dehibe. Tena lavitra ny fanarahana ny fahazavana nomena antsika hidirana amin'ireo tanan-dehibe ary hanangana alitara ho an'Andriamanitra isika. Tarihintsika tsikelikely ireo fanahy ho amin'ny fahazavan'ny fahamarinana feno. Maro ireo maniry sakafom-panahy. Tokony hiasa mandrakariva isika mandra-panorina fiangonana sy trano, na dia tsotra aza, hiangonana. Tena nahery tokoa aho tamin'ny finoako fa maro ny olona tsy amin'izao finoantsika izao no manohana be dia be tokoa amin'ny alalan'ny fanampiana ataony. Nomena fahazavana aho fa amin'ny toerana maro, indrindra amin'ny tanan-dehibe ao Amerika, dia hanome fanampiana izy ireo. - PUR, 23 Oktobra 1902.